၁၁.၇.၂၀၁၁ ရက်နေ့ ရဲတံခွန်လုပ်ကွက်တွင် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ လူ(၃)ဦးသေဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ၁၁.၇.၂၀၁၁ ရက်နေ့ ရဲတံခွန်လုပ်ကွက်တွင် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ လူ(၃)ဦးသေဆုံး
၁၁.၇.၂၀၁၁ ရက်နေ့ ရဲတံခွန်လုပ်ကွက်တွင် ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျ လူ(၃)ဦးသေဆုံး
Posted by ေမာင္ဆန္း on Jul 12, 2011 in Myanma News | 13 comments
တနင်္သာရီ ကမ်းလွန် ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းတွင် တူးဖော်နေသည့် မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် ပက်ထရိုးနပ်စ် ကုမ္ပဏီမှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တစီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပင်လယ်ပြင် အတွင်း ပျက်ကျသွားရာ လူ ၃ ဦး သေဆုံးသွားသည်။
ရဟတ်ယာဉ်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် ပက်ထရိုးနပ်စ် ရေနံကုမ္ပဏီက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ပြင်သစ်အခြေစိုက် ဟယ်လီ ယူနီယံ Heli Union ကုမ္ပဏီမှ ငှားရမ်းသုံးစွဲထားသည့် ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တွင် လူ ၁၁ ယောက် လိုက်ပါ လာကြောင်း ပက်ထရိုနပ်စ်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
“တွင်းတူးစင်ကို အသွား ၃ မိနစ်အတွင်းမှာ ပျက်ကျတာ၊ ရေထဲရောက်တော့ စောက်ထိုးဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗော့တွေပါတော့ နစ်မသွားဘူး ပေါ်နေသေးတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တွင်းတူးစင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် လူချင်းလဲလှယ်ရန် အသွားတွင် ပျက်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ၈ ဦးကို ကယ်ဆယ် နိုင်ပြီး ရဟတ်ယာဉ်မောင်းသူ အပါအဝင် မြန်မာ ၃ ဦးသေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရှိ Heli Union ရဟတ်ယာဉ် ကုမ္ပဏီသို့ ဧရာဝတီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ပျက်ကျမှုမှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ သေဆုံးသူများ၏ အမည်နှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို စုံစမ်းဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် Ms.Pasi က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တနင်္သာရီ ကမ်းလွန်ရှိ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေးတွင် မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် ပက်ထရိုးနပ်စ် ကုမ္ပဏီအပြင် ထိုင်းနိုင်ငံပိုင် Ptt စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ၊ ပြင်သစ်ပိုင် တိုတယ် ကုမ္ပဏီများ လုပ်ကိုင်နေသည်။
(ဧရာဝတီကယူထားတာပါ ၊ လူတွေ သိချင်မယ်ထင်လို့ ပို့စ်အနေနဲ့ ကူးတင်လိုက်တာပါ၊ မြန်မာလေယာဉ်မှူးတစ်ဦးပါတယ်လို့ကြားမိတယ် )
နောက်ထပ် အချက်အလက်အသစ်တွေ ပါလာလို့ weekly ကသတင်းပါ အောက်မှာ ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်
ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရဲတံခွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းအနီးတွင် လုပ်ငန်းသုံး ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့က ပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါယာဉ်တွင်ပါရှိသူ ၁၁ဦးအနက် ရဟတ်ယာဉ်မှူး အပါအဝင် သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Patrones ရေနံကုမ္ပဏီ မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့ နံနက်၉နာရီခန့်က ရဲတံခွန်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး စီမံကိန်းရှိရာသို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Heli Union ကုမ္ပဏီပိုင် Sikorsky SK 76 အမျိုးအစား ရဟတ်ယာဉ်သည် လုပ်ငန်းသုံးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် ကံပေါက်လေယာဉ်ကွင်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ရဲတံခွန်ပလက်ဖောင်းတွင် ခေတ္တရပ်နားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရဲတံခွန်ပလက်ဖောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်း ၉ဦးနှင့် ရဟတ်ယာဉ်မောင်း နှစ်ဦးတို့သည် နံနက် ၁ဝနာရီ ဝန်း ကျင်ခန့်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာ ရဲတံခွန် ပလက်ဖောင်း၏ အနောက်ဘက် ပေ ၃ဝအကွာခန့်တွင် စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ပင်လယ် အတွင်းသို့ ပျက်ကျမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
“အခု လောလောဆယ်မှာတော့ စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး ရေထဲကို ထိုးချလိုက်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ crew ချိန်းပြီး ပြန်အတက်မှာဖြစ်တာပါ။ ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ ရဲတံခွန် ပလက်ဖောင်းက သင်္ဘောတွေနဲ့ သွားကယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်း က ဆရာဝန်နဲ့ကုသခဲ့ပြီး သုံးယောက်ကတော့ သတိလစ်မေ့မြောပြီးနောက် သေဆုံးသွားပါတယ်”ဟု လေကြောင်းလိုင်း အသိုင်းအဝိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
Patrones ရေနံကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက” ရဲတံခွန်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း လုပ်ငန်းသုံး ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း ပျက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ဝန်ထမ်းသုံးဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ ဝန်ထမ်းသုံးဦးက ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီနဲ့ sub contractor ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးခန့်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲ လျော်ကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အတိုင်း sub contractor ကုမ္ပဏီတွေ နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျတဲ့နေ့ မှာပဲ ပင်လယ်ပြင်ကို သွားရောက် လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင် ရဟတ်ယာဉ်ဆယ်ယူမှု အပိုင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်”ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
“ဇူလိုင်လ ၁၁ရက်နေ့မှာ ရဲတံခွန် ပလက်ဖောင်းမှာ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျတယ်။ သုံးယောက်သေတယ်လို့ သိရတယ်။ သေဆုံးသူတွေ က MOGE က ဝန်ထမ်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မလေးရှားရေနံကုမ္ပဏီဖြစ် တဲ့ Patrones ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်းက ပြည်ပကုမ္ပဏီနဲ့ အစိုးရတို့ အကျိုးတူ ပူပေါင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်”ဟု စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း(MOGE) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြား ခဲ့သည်။
သေဆုံးသူသုံးဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို ဇူလိုင်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည် သယ်ယူခဲ့ကြောင်းနှင့် ပျက်ကျခဲ့သည့် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တွင် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ပြီး သေဆုံး သူသုံးဦးမှာ မြန်မာလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
has written 64 post in this Website..
မေကာင္းတာ မေတြးနဲ႕ မႀကံနဲ႕ မလုပ္နဲ႕ ၊ ကုသိုလ္ရမဲ့ဟာလုပ္ ၊ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနပါ
View all posts by ေမာင္ဆန္း →
သက်ဆိုင်သူ မိသားစုတွေတော့ ရင်ကြွဲပီ။
သေသွားတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်မှူးရဲ့ နာရေး ဒီနေ့သတင်းစာမှာပါတယ် ၊
ဦးအုန်းသိမ်း အသက် (၅၈) တဲ့ တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါ
nozomi ကိုယ်တိုင်က ဒီလို လုပ်နေတော့ အသစ်တွေကို ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ
အီးတုံးလေး အခုလိုပြောပြတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
အဲဒီကိစ္စက မနေ့ကဖြစ်တာ ညနေကျ မိတ်ဆွေတွေဆီက တဆင့် သိရတယ်
မနက်ကထိ ရွာထဲမှာ ပြောတာမတွေ့သေးဘူး မသိသေးသူတွေကိုလဲ နောက်ကျမကျန်ရစ်အောင် ပြောပြချင်တယ်
တစ်ခါတလေ ကိုယ်သိတာတွေ ကိုယ့်ဘာသာရေးလို့မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ သတင်းဌာနတွေမှာ ဘာတွေပြောနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးပဲ လုပ်လိုက်ရတာပါ
ဒါတောင် တင်ခါနီး တင်သင့် မတင်သင့် ချီတုံ ချတုံ ဖြစ်နေပါသေးတယ် အပျော်သက်သက် မဟုတ်ဘဲ သေချာတဲ့ သတင်းမို့ တင်ဘို့ ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာပါ
ဒီရက်ထဲ ထိုင်းသင်ခန်းစာ ဆိုလဲ ကူးတင်တာပါပဲ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပို့စ်ကနေ ပြန်ရလိုက်တာ အများကြီးပါ တင်ပေးတဲ့ သူကြီးတောင် ကျေးဇူးအများကြီး တင်မိပါတယ်
ရွာသက်လေးနဲနဲ ရကတဲက အရည်မရ အဖတ်မရ တွေ ကူးမတင်ဘို့ကိုတော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွာအတွက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့ သတိပေးတာကိုတော့ တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကူးတင်တာကို စည်းကမ်းထုတ်ပြီး တားထားတာ အကြောင်းတွေအများကြီးပါ…။
ရွာထဲနည်းနည်းကြာသူတွေဆို.. ကူးတင်ကြလွန်းလို့ မန္တလေးဂေဇက်ဝက်ဆိုက်ကို ဘယ်လိုပြောကြတယ်..။ ဘယ်လိုတွေဖြေရှင်းရတယ် သိကြတယ်..။
လုံးဝကို မဖြစ်မနေ သိသင့်တဲ့သတင်းဖြစ်လို့ကူးတင်တယ်ဆိုရင်.. မူရင်းပိုင်ရှင်ဆီခွင့်တောင်းပါ။
ခရက်ဒစ်အပြည့်ပေးပါ။ လင့်ပေးပါ..။ ကိုယ့်အတွေးဝေဖန်ချက် သတင်းသုံးသပ်ချက်ထည့်ရေးပေးပါလို့ပါပဲ..။
ဒါပေမဲ့.. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့.. ပြည်ပ မြန်မာမီဒီယာကသတင်းတွေ ကူးမတင်ပါနဲ့နော..။ ပြသနာရှင်းရလွန်းလို့…။ တောင်းပန်ရတာတွေလည်း များလှပြီ..။
အောက်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့.. အဖြစ်ကလေးတခုကိုပဲဖတ်ကြည့်ပါဦး..။ ရွာသားအသစ်တွေလည်း ဒီစည်းကမ်းတော့ တိတိကျကျလိုက်နာစေချင်ပါတယ်..။
ဒီသတင်းမျိုးတော. တင်ပေးသင်.တယ်လို.ကျနော်လဲထင်ပါတယ် လူတိုင်းမသိနိုင်တဲ.သတင်းလေ
သတင်းတင်ပေးတဲ. nozomi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
လင်.က ကျော်ကြည်.ရတာမို.လို.မထည်.နိုင်တော.တာ တောင်းပန်ပါတယ်
ဒါနဲ. အခုတလော ဒေါက်တာ လွမ်းဆွေ ရဲ.ဆိုဒ်က ကျော်ကျော်ဝင်နေရတယ်နော်
ကျော်ချင် ခွချင် မြန်မာနိုင်ငံ အင်တာနက်သုံးဆိုပြီး
ကူးတာတွေမကူးတာတွေတော့မသိဘူး။ အခုမှ သိရတဲ့ သတင်းအသစ်အဖြစ်သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
သေဆုံးသူတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတော့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်မတို့လို ဆိုက်တွေအများကြီး လိုက်မဖတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကျိုးရှိတဲ့ copy တွေပါ။
blogspot တိုင်းကလည်းဖတ်လို့ မလွယ်ပါဘူး။
သိသင့်တယ်ထင်ရင် ဘောင်ဝင်အောင် လုပ်ပြီးတင်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။